Qareen doonaya inuu xafiiska banneeyo barasaabka Nairobi – The Voice of Northeastern Kenya
Qareen doonaya inuu xafiiska banneeyo barasaabka Nairobi
Star FM December 6, 2018
Garyaqaan lagu magacaabo Mr .Boniface Nyamu ayaa maxkamadda sare ee dalka u gudbiyay dacwad uu ku doonayo inay go’aamiso in barasaabka Nairobi Mike Sonko uu ku fashilmay gudashada waajibaadkii loo soo doortay sidaasi awgeedna uu xafiiska banneeyo.
Mr .Boniface ayaa kiiskan maxkamadda geeyay kadib markii guddoomiyaha uu ka laabtay go’aan uu baabuurta dadweynaha uga mamnuucay inay ka howlgalaan farasmagaalaha Nairobi.
Waxaa uu ku eedeyay in Mike Sonko uunan qaadin tallaabooyin lagu fududeyn karo cariiriga dhanka isku socodka baabuurta ee ka jira bartamaha magaala madaxda wadanka.
Sido kale waxaa uu ku doodaya in guddoomiyaha uunan wax ka qaban wadooyinka aanan taya ahaan wanaagsanayn sidaasi awgeedna dadkii soo doortay uunan si buuxda ugu adeegin.
Mike Sonko ayuu ku dhaliilaya inuu liiday wasiirka wasaaradda arrimaha degaanka iyo Keymaha Mr. Keriako Tobiko xili geeda lagu abuurayay dugsiga Moi Forces.
Qareenka ayaa sido kale ku doodaya in burcad weeraraya guddoomiyihii hore ee jaaliyadda ganacsatada Nairobi Timothy Muriuki oo muuqaal ka soo dhexmuuqday la sheegay in Mike Sonko uu soo adeejiyay in kastoo barasaabka uu taasi iska fogeeyay.
Garyaqaanka ayaa ku andacoonaya in hadii maxkamadu aynan tallaabo qaadin, barasaabka uu qaadan karo go’aamo saameyn ku yeelanaya shacabka.
Dhawaan ayay ahayd markii Mike Sonko uu mataatuuda iyo guud ahaan gaadiidka dadweynaha ka mamnuucay bartamaha caasimadda taasi oo saameyn ku yeelatay dadwweynaha in kastoo markii dambe uu ka raali geliyay dhibaatadii soo gaartay.
← Soomaali lagu maxkamadeeyay Jaziirada Malta
Marwada koowaad ee dalka oo abaalmarin la guddoonsiiyay →